मान राईको फिलिम निर्माण अनुभव - LibjuBhumju
September 15, 2020 LB46LeaveaComment on मान राईको फिलिम निर्माण अनुभव
कुनै समय मलाई नि फिलिम बनाउने भुत चढ्यो । महानायक राजेश हमाल दाइको डायलग त राम्ररी बोल्न नजान्ने मान्छे, आटयो केटोले । बल्लतल्ल २, ४ महिनामा बन्यो पनि । वह ! अब हलमा चल्नेभो केटोको फिलिम । तर सुरुसुरुमा त वितरक ले ठुलै आशा दिएको थयो तर रिलिज डेट आउदै गर्दा कुरा उल्टो हुदैगयो ।कास्टिङ राम्रो छैन रे ! टिजर राम्रो भएन रे ! सङ हिट भएन रे ! बिदेशी फिलिमको ट्रेन्डिङ राम्रो छ रे ! इत्यादी इत्यादीले हलवालाहरु शो दिन मान्य छैन ! रहरले भएनी फिलिम बनाइयो यसो एउटा हलमा चलाउन पाएनि हुन्थ्यो बल्लतल्ल वितरकसंग हेर्ने भएन भनेनी आफ्नै पैसाले टिकेट किनेर भरिभराउ बनाउने सर्तमा एउटा हलमा शो गर्ने अनुमति पाइयो । ठुलो भाग्य ! …. हल मालिकको अनि वितरकको जयहोस् !
त्यस पश्चात चार वर्ष जति भो छिर्ने मन लागेन । अस्ति कुन दिन हो यसो मल घुम्दै जादा हल छिरियो ।
कास्टिङ राम्रो, सङ राम्रो, ट्रेन्डिङ राम्रो तर पहिलो शोमा नै हल आधा खाली !
फिलिम सिद्धियो घर फर्किदै सोच्न थाले “किन होला यस्तो राम्रो फिलिम हेर्ने मान्छे नभा को ?”
बल्ल बुझे । हो त, समय कहिले एक जनाको साथमा रहन्न I अहिलेको समय भनेको युट्युब र नेटफ्लिक्सको I चट्ट घरमै बसेर नया नया फिलिम हेर्ने जमाना । ठिक्क पर्यो त्यो हल मालिक र वितरक अब कसको नमस्कार खाने ?
समय सधै आफ्नो रहन्न ख्याल राखेस !
फिलिम झुर थियो होला भनेर भन्न पनि सक्नु हुन्छ तपाई । हो, बास्तवमा इङ्लिस र हिन्दि फिलिमको दाजोमा आकाश पातालको फरक थियो I त्यसै त हामी बिदेशी भाषा बोल्न रुचाउने, बिदेशी पहिरन अनि एसएलसीको सर्टिफिकेट हात पर्नासाथ विदेश ताक्ने । म पनि त हुँनि इङ्लिस बोर्डिङ स्कुल पढेर आठ आठचोटी भर्ति भिड्ने कठै ! यो बिदेशी मोह ।
ल, फिलिम रिलिजको लागि प्रोमोसन गर्दैगइयो, खर्च बढ्यो । रिलिज हुनु २,३ दिन अघिमात्र थाहापाइयो हामीसंगै बिदेशी फिलिम पनि रिलिज हुने रे ! त्यो पनि नेपालमा सुटिङ भएको फिलिम ‘द एभरेस्ट’ ।
मुर्दार हलवालाहरुले एक हफ्तापछि मात्र रिलिज गरिदिएनी हुने थियो नि । कमसेकम २, ४ जनाले हेरेर तारिफ नभएनि गालित गर्थे ।
मलाई तालिभन्दा गालि मनपर्छ किनकि गालीमा सत्यता झल्केको हुन्छ जसले अझ हौशला दिलाउछ अनि आफ्नो गल्ति, कमजोरी सुधार्न तर तालिमा सत्यता लुकेको पनि हुन सक्छ।
पोस्टपोन गरेर फेरी रिलिज गर्न नि खर्च लाग्थ्यो त्यो सामर्थ्य थिएन । वितरकले बिदेशी फिलिम पोस्टपोन गराएर नेपाली फिलिम प्राथमिकता दिलाउनु पर्नेमा आफै टिकेट कटाएर हल भरिभराउ गराउने उपाए दिए अरु उपाय थिएन त्यसै गरियो । बिदेशी मोहले चुर्लुम्म डुबेको समाजमा एउटा फिलिम नचल्दा के नै उल्टयो र ! तर हामी जस्तै सपना बोकेर यहि देश र समाजमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बोकेका, अपन्त्वो बोकेका हजार युवाहरु कठैबरा !
भाले फाइट फिलिम हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्न सक्नु हुनेछ-
‘कान्छी’ को ‘यो जिउ दाउमा लाउने…’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
रमेश हमाल ठकुरीलाई एक्लै बाँच्न गाह्रो भएपछि निकाले यस्तो गीत (भिडियोसहित)